EA012 OMG Rafitra Fanairana Toilet An-tànana | Vahaolana OMG
Rafitra fanairana EA012 OMG sembana / tandindona
Ny Alarm System EA012 Disabled / Handicap dia fitaovana mora ampiasaina amin'ny alàlan'ny alim-basy amin'ny alàlan'ny haitao maoderina sy ny haitao maoderina.
Ny fampandrenesana varavarankely tsy misy kilema dia tena ilaina mba ahafahan'ny olona manana fahasembanana hampandre ny mpikambana sy ny mpitantana ny mpiasa izay ilaina ao amin'ny toeram-ponenan'ny efitra fidiovana na fanoloana trano fidiovana.
Ity rafitra fanairana an-tsokajin'ny trano fivoaham-panafody, izay ahitana ny fomba fiasa amin'ny endrika, dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana maro amin'ny toeram-pitsaboana sembana ao amin'ny trano fisakafoanana any amin'ny hopitaly.
Ity kitay ity dia feno tanteraka amin'ny tadim-pirafesam-baravarana misy ravin-damba roa, sombin-drakitra miaraka amin'ny soratra Braille, marika fampitomboana / flasher. Misy ihany koa ny sticker sembana.
Ny tady tetezana, miloko mena ho an'ny fahitana, dia manana peratra roa izay tokony hapetraka any amin'ny toerana manokana - tokony tokony 100mm ihany avy eo amin'ny gorodona ary ny iray dia tokony ho avo 800-1000mm, azo tanterahina amin'ny WC. Ny bokotra resetana, izay misy marika hanondroana ny olona sembana fa ny fanampiana dia eny an-dalana, dia tokony ho hita ao amin'ny lavan'ny WC, amin'ny 1200mm avy amin'ny tany.
Ny mari-pamantarana fanampiana vonjy taitra dia tokony hapetraka ao amin'ny toerana tena hita maso ivelan'ny efitrano fandriam-pahalemana izay hahitana azy mora foana ary hihaino tsara ny feo.
Ny fametrahana ity rafitra fanairana an-tsokosoko an-dàlam-panala tsy manara-penitra ity dia manampy ireo tompona trano sy tompona fandraharahana hanaraka ny fanarahan-dalàna ny DDA, BS8300 ary ireo karazana fitsaboana hafa.
Teboka telo ihany no mametraka eo amin'ny rafitra marika
Io rafitra io dia afaka mifandray mora amin'ny rafitra hafa
Mora kokoa ny manitatra ny rafitra toy ny fitomboana
Misy fitaovana fanamorana mivezivezy maro samihafa
Natao tamin'ny rojo rojo roapolo
Ny singam-bidy dia omena amin'ny olona manana sakana amin'ny sembana
Ny rafitra dia manampy amin'ny fiantohana ny fanarahan-dalàna ny DDA, BS8300 ary ireo fikarakarana hafa
Vita amin'ny fotsy mba hialana amin'ny fomba tsara sy ny tontolo manodidina
Ny famaritana etsy ambany dia tandindona iray mampiseho ny fametrahana ny efitrano ao anatin'ireo toeram-pitsaboana
OMG-Solutions - Kitara fanairana amin'ny kabine tanana - sary mampiseho ny toerana misy ny singa ao anatin'ireo toerana misy kilema